munaasabada ciidal-adxa oo si balaadhan saaka loogu tukaday xarunta deegaanka ee jijiga. - Cakaara News
munaasabada ciidal-adxa oo si balaadhan saaka loogu tukaday xarunta deegaanka ee jijiga.
iyada oo si balaadhan maanta guud ahaan ba caalamka islaamka siwayn looga tukaday salaada ciidul-dxa ayaa waxaa siwayn loogu tukaday xarunta degaanka soomalida ee jijiga waxaana ka soo qayb galay tukashada salaadaa masuuliyiinta xukuumada ugu saraysa oo uu ka mid yahay madaxwaynah deeganka soomalida mudane cabdi maxamuud cumar,golaha wasiirada DDSI,Golaha Sare ee Islaamka DDSI,Culumaaudiinka iyo dhamaan qaybaha ka duwan ee bulshada ku dhaqan xarunta deegaanka ee magaalada jijiga.
waxaana munaasabadaasi ugu horayntii ka hadlay gudoomiyaha golaha sare ee arimah islaamka DDSI mudane sheekh c/rahmaan oo siwayn uga waramay ahmiyada ay maalintani u leedahay guud ahaanba caalamka islaamka isaga oo tilmaamay in ay muhiimtahay in ay dhamaan shacabka islaamku ay isku naxariistaan.
madaxwaynaha deegaanka soomalida mudane cabdi maxamuud cumar oo isaguna ka soo jeediyay khudban dhinacya badan taabanaysa ayaa waxa uu siwayn ugu hanbalyeeyay munaasabada ciidul-adxa dhaman caalamka islaamka kuwa itoobiya gaar ahaan shacabka DDSI Dal iyo Dibadba wuxuuna madaxwaynuhu tilmaamay in deegaanka hada ay si habsamiya uga da'een roobabkii dayrta oo xiligii la sugayay siwayn uga da'ayaan deegaanka.
waxa kale oo uu madax waynuhu carabka ku dhufday in dhinaca horumarka,nadaglayada iyo maamulka suuban in ay deegaanka si buuxda uga hano-qaadeen waxa kale oo uu madaxwaynuhu siwayn uga waramay in ay deeganka ku soo fool leedahay xuska 8aad ee maalinta qoomiyadahaiyo Shucuubta loona baahan yahay in shacabka deegaanku siwayn ugu diyaar garoobaan islamarkaana siwayn uga feejignaadaan wax kasta oo carqalad iyo sharf-dhac ku ah shacabka Soomaalida Itoobiya.
munaasababa xuska maalinta qoomiyaduhuna tahay maalinta ay sharaf wayn u soo hoyanayso sidaasi darteena ay tahay in ay shacabka deegaanku sharaftooda wanaagsan muujiyaan sidoo kale oo uu ka shanqadhiyay madaxwaynhuhu in shacabka deegaanka soomalida iyo guud ahaanba shacabka somalidu tahay shacabka ugu dhaqanka wanaagsan haboon tahayna in ay muujiyaan maalintaasi dhaqanka shacabka deegaanka ee qiimaha badan